Pot Pot, I-Butcher yaseCambodia - I-Biography
Pot Pot. Igama lifana neloyiko.
Ngaphandle kwimbali ephawulwe ngegazi yembali yekhulu lama-20, umbuso we-Pol Pot wase Khmer Rouge eCambodia uphuma ngokukhawuleza nokungaqondakali kobubi bawo. Egameni lokudala inguqu yezobukhomishana bezolimo, uPol Pot kunye nabangaphantsi kwakhe babulala ubuncinane iigidi eziyi-1.5 zabantu babo kwiindawo zokubulala ezibuhlungu. Bawuphelisa phakathi kwe-1/4 kunye ne-1/5 yelizwe lonke labantu.
Ngubani oya kwenza oku kowabo? Luhlobo luni lwe-monster elibulala izigidi egameni lokususa ikhulu leminyaka "yesimanje"? Ngubani owayengumPol Pot?
Umntwana ogama linguSalot Sar wazalwa ngo-Matshi ka-1925, kwidolophana encinci yokuloba yasePrak Sbav, isiFrench sase-Indochina . Intsapho yakhe yayixutywe ngokobuhlanga, isiTshayina kunye neKhmer, kunye ne-middle class class. Babenamahektare angamashumi amahlanu eepilisi zerayisi, eziphindwe ngokuphindwe kabini kunabamelwane babo, kunye neendlu ezinkulu ezazimi kwiindawo zokuhlala xa kwenzeka umlambo. USaloti uSara wayengowesibhozo kwabantwana abasithoba.
Intsapho kaSaloth Sar yayinxulumene neentsapho zaseKambodia. Unina wakhe wayenomsebenzi kwikhaya likaKumkani uNorodom, kunye nomzala wakhe wokuqala uMeak, kunye noodadewabo uRoung, babekhonza njengamashweshwe asebukhosini. Umntakwabo uSolomon uSuong naye wayesegosa eliseburhuleni.
Xa uSalot Sar wayeneminyaka elishumi ubudala, intsapho yakhe yamthuma ngamamayela angama-100 ukuya ngasezantsi kwidolophu-dolophu yasePnom Penh ukuya kwi-Ecole Miche, isikolo samaKatolika saseFransi.
Wayengeyena umfundi olungileyo. Kamva, le nkwenkwe idluliselwe kwisikolo sobugcisa eKompong Cham, apho yafunda khona ukumba. Imizabalazo yakhe yezemfundo ebusheni bakhe yayiya kummisela kakuhle kwiminyaka emininzi ezayo, yanikwa i-Khmer Rouge imigaqo-nkqubo yokuchasene nengqondo.
IFrench Technical College:
Mhlawumbi ngenxa yokudibanisa kwakhe kunokwakheka kwirekhodi, urhulumente wamnika i-scholarship ukuya eParis, kwaye uphishekela imfundo ephakamileyo kwintsimi ye-elektroniki kunye ne-rediyo kwi-Ecole Francaise d'Electronique et Informatique (EFRIE).
USaloth Sar wayeseFransi ukususela ngo-1949 ukuya ku-1953; Wachitha ixesha elide lakhe ukufunda ngeKhomishini kunokuba i-electronics.
Ephefumlelwe ngu- Ho Chi Minh ukuvakalisa ukuzimela kweVietnam evela eFransi, uSaloth wajoyina iMarxist Circle, eyayilawula i-Khmer Students 'Association eParis. Kwakhona wajoyina iFrench Communist Party (i-PCF), eyayinxulunyanisa abahlali basemaphandleni abangafundile njengabalingani beqiniso, ngokuchasene nokutyunjwa kukaKarl Marx kubasebenzi basezidolophini njengabasebenzi.
USoloth Sar wagxothwa ekholeji ngo-1953. Ekubuyeni kwakhe eCambodia , wahlola amaqela avukela urhulumente kwi-PCF kwaye wabika ukuba iKhmer Viet Minh iyona ndlela iphumelele.
ICambodia yazimelela ngo-1954 kunye neVietnam kunye neLaos , njengenxalenye yeSivumelwano saseGeneva apho iFransi isetyenziselwa ukuzikhupha kwiVietnam yaseVietnam . INkosana uSihanouk yadlala amaqela ezopolitiko ahlukeneyo eCambodia kunye kunye nolululo olukhethiweyo; Nangona kunjalo, inkcaso ye-leftist yayibuthathaka kakhulu ukuba ingumngeni umngeni kuye okanye kwibhokisi yokuvota. USaloth Sar waba ngumntu ohamba phakathi phakathi kwamaqela angama-left-wing ahlonishwa ngokusemthethweni kunye ne-communist underground.
NgoJulayi 14, 1956, uSalot Sar watshata utitshala uKhieu Ponnary. Ngandlela-thile, wayesebenza njengomfundisi kwiimbali zaseFransi kunye neencwadi kwiikholeji ebizwa ngokuba yiChamraon Vichea. Ngazo zonke iingxelo, abafundi bakhe babethanda uthisha othethileyo kunye nobubele. Kungekudala uza kushukuma ngaphakathi kwinqanaba le-communist, ngokunjalo.
I-Pot Pot ilawula ukulawulwa kwamaKomanisi:
Kuwo wonke ama-1962, urhulumente waseCambodia waphonsela kwiinkomnisti kunye namanye amaqela apheleyo. Babamba amalungu eqela, bavalela amaphephandaba abo, baze babulala iinkokheli ezibalulekileyo zama-communist ngelixa bevalelwe. Ngenxa yoko, u-Saloth Sar wanyuka kwiqela lamalungu ephilileyo.
Ekuqaleni kuka-1963, iqela elincinci labasindileyo lanyula uSoloth njengoNobhala weKomidi yeCommunity yeKomiti yamaKhomanisi. Ngo-Matshi, kwakufuneka afihle xa igama lakhe libonakala eluhlu lwabantu ababefuna ukubuza imibuzo malunga nemisebenzi ye-leftist.
USalot Sar wagijima waya eNyakatho yeVietnam, apho wadibanisa neyunithi yaseVi Viet Minh .
Ngenkxaso kunye nentsebenziswano evela kumaKomanisi aseVietnam ahleleke ngakumbi, uSaloth Sar wahlela ukuba kubekho intlanganiso yeKomiti yeCambodian Central ekuqaleni kowe-1964. IKomiti Ephakathi yayibiza umzabalazo olwabalaseleyo kunye noRhulumente waseCambodia, (kunokuba ungathandabuzeki) ukuzithemba ngokwengqiqo ukuzimela kwii-Communists zaseVietnam, kunye ne-revolution esekelwe kwi-prograriat yegrarian, okanye i-paysas, kunokuba "i-work class" njengoko uMarx wayibone.
Xa iNkosana uSihanouk ikhupha enye i-crack-down down against the leftists ngo-1965, inani elithile labafundisi kunye nabafundi beekholeji babalekela ezixekweni baza bajoyina umbutho wama-Communist guerrilla owawuthatyathwa kwiindawo ezisemaphandleni. Ukuze babe ngabaguquleli, kunjalo, kufuneka balahle iincwadi zabo baze baphume. Babeya kuba ngamalungu yokuqala eKhmer Rouge.
I-Khmer Rouge ithatha iCambodia:
Ngo-1966, u-Saloth Sar wabuyela eCambodia waza wabiza iqela le-CPK-Communist Party yase Kampuchea. Iqela laqala ukucwangcisa i-revolution, kodwa lwabanjiswa-abalindi xa abalimi belizwe lonke bevutha ngentukuthelo ngenxa yentengo ephezulu yokutya ngo-1966; I-CPK ishiyiwe.
Kwakungekho ngoJanuwari 18, 1968, ukuba i-CPK iqalile ukuvukela kwayo, ngokuhlaselwa komkhosi wempi kufuphi neBatambambang. Nangona i-Khmer Rouge engayigxininise ngokupheleleyo isiseko, yayikwazi ukuthatha i-cache yezixhobo eziye zaphendukela kumapolisa kwimizana yaseCambodia.
Njengobundlobongela bekhula, uNkosana Sihanou waya eParis, wabuya wabayalela ababhikishi ukuba baqoke ii-ambassade zaseVietnam eFnom Penh. Xa izibhikisho zavela esandleni, phakathi kuka-Matshi 8 ukuya ku-11, wabe esetyala ababhikishi ngokutshabalalisa i-ambassade kunye neendawo zasekhaya zaseVietnam nasekhaya. ISigqeba soLuntu sifunde ngolu hlobo lweziganeko kwaye luvotele iSihanouk ngaphandle kwamandla ngoMatshi 18, 1970.
Nangona iKhmer Rouge yayisoloko isichasene neSihanouk kwi-propaganda yayo, iinkokheli zamaKhoyina nezamaVietnam zamqinisekisa ukuba zixhasa iKhmer Rouge. U-Sihanouk waya kwirediyo waza wabiza abantu baseCambodia ukuba bathathe iinqwelo kunye noorhulumente, balwe neKhmer Rouge. Okwangoku, ibutho laseNyakatho yaseVietnam liye lahlasela iKambodia, icinezela ibutho laseCambodia libuyele ngaphantsi kweekhilomitha eziyi-25 ukusuka ePnom Penh.
Iingxowa zokubulala - I-Cambodian Genocide:
Igama likaKhomishani yezobuqhetseba, iKhmer Rouge yanquma ngokukhawuleza kwaye ivuselela ngokutsha isizwe saseCambodia njengesizwe sokulima esingaqhelekanga, sikhululekile kuyo yonke impembelelo yamanye amazwe kunye neminyango yexesha langoku. Ngokukhawuleza basusa yonke impahla yangasese baza babamba yonke imveliso yentsimi okanye ifektri. Abantu abahlala kwiidolophu nakwiidolophu - ezigidi ezingama-3.3 - baphunyelelwa ukuba basebenze kwiindawo zasemaphandleni. Baye babhalwa ngokuthi "idipozithi," kwaye banikwe imfutshane emfutshane ngenjongo yokufa indlala. Xa inkokheli yeqela uHou Youn inqabile ukukhutshwa kwePnom Penh, i-Pol Pot yambiza umrhwebi; Hou Youn wanyamalala.
Ulawulo lukaPol Pot lujolise kwiingcali - kuquka nabani na abanezemfundo, okanye nabathintana nabo bangaphandle - kunye nabani na ophakathi kwinqanaba eliphakathi okanye phezulu. Abantu abanjalo bathuthunyiswa kakubi, kubandakanywa ne-electrocution, ukukhupha ngaphandle komnwe kunye neengwenya, kwaye bekhutshwe ngophilile, ngaphambi kokuba babulawe. Bonke oogqirha, ootitshala, oogqirha bamaBuddha kunye namadonti, kwaye iinjineli zafa. Wonke amagosa omkhosi kazwelonke abulawe.
Uthando, ubulili, kunye nokuthandana, zagqitywa, kwaye urhulumente kufuneka avumele imitshato. Nabani na obanjwe ekuthandweni okanye ngesondo ngaphandle kwemvume esemthethweni eyenziwa. Abantwana babengavunyelwe ukuba baye esikolweni okanye badlale-babelindeleke ukuba basebenze kwaye babeya kubulawa ngokuthe ngqo xa bexhamla.
Ngokumangalisayo, abantu baseCambodia abazange bazi ukuba ngubani owenzayo kubo. USoloth Sar, owaziwa ngokuziqhelana nabahlobo bakhe njengePol Pot, akazange akhiphe ubunikazi bakhe okanye lakhe iqela kubantu abaqhelekileyo. Ingqungquthela engqongqo, uPol Pot ubhalele ukulala ebhedeni elifanayo ubusuku bobabini ngokulandelana ngenxa yokwesaba ukubulawa.
I-Angka yayiquka amalungu angama-14,000 kuphela, kodwa ngokufihlakeleyo kunye nokwesabisa amaqhinga, babusa ilizwe labantu abayizigidi ezili-8 ngokupheleleyo. Abo bantu abangazange babulawe ngokukhawuleza basebenza emasimini ukususela elangeni ukuya kutsho kwelanga, iintsuku ezisixhenxe ngeveki. Bahluke kwiintsapho zabo, badla kwizidlo zokutya, kunye nokulala emagqabini emidlalo.
Urhulumente uthathe zonke iimpahla zabathengi, ukufaka izithuthi, iifriji, ii-radios kunye ne-air conditioners ezitratweni kunye nokutshisa. Phakathi kwemisebenzi evinjelwe ngokupheleleyo yenziwa ngumculo, umthandazo, usebenzisa imali nokufunda. Nabani na ongayithobeli le miqobo ethintela kwiziko lokuqothula okanye afumaneka ngokukhawuleza entloko kwenye yeeNkundla zokuKulala.
I-Pol Pot kunye neKhmer Rouge ayifuni nto ngaphantsi kweminyaka emininzi yenkqubela phambili. Babenomdla kwaye banako ukucima nje kuphela iimpawu zenkqubo yesimanje kodwa nabo banxulumene nayo. Ekuqaleni, ama-elite ayenobunzima be-Khmer Rouge, kodwa ngowe-1977 nabasimili ("abantu base-base") babulawa ngamacala anjenge "ukusebenzisa amagama avuyayo."
Akukho mntu uyazi kakuhle ukuba bangaphi abantu baseCambodi babulawa ngexesha lolawulo lukaPol Pot, kodwa uqikelelo oluphantsi luba neqela eliphakathi kwe-1.5 yezigidi, ngelixa abanye baqikelela ukuba izigidi ezi-3, kubangelwa inani labantu abangaphezu kwezigidi ezi-8.
Kulo lonke elawula ukubusa kwePol Pot, izikhwama zangasemdeni zavakala ngezikhathi ezithile kunye neVietnam. Ngomhla ka-Meyi 1978 ukuvukela ngabangamaKomanisi baseKhammer Rouge kwimpuma yeKambodia kwabangela uPol Pot ukuba abize ukutshabalalisa bonke abantu baseVietnam (abantu abayizigidi ezingama-50), kwakunye ne-1.5 million yeCambodians kwicandelo lesempuma. Waqala ekuqaleni kwesi sicwangciso, wabulala abangaphezu kwama-100,000 aseMpumalanga yeKambodi ekupheleni konyaka.
Nangona kunjalo, iingxelo kunye nezenzo zikaPol Pot zanika urhulumente waseVietnam ingqiqo efanelekileyo yemfazwe. IVietnam yaqalisa ukuhlasela konke eCambodia kwaye yaxotha iPol Pot. Wabalekela kwimida yeThai, ngelixa iVietnam zifake uhulumeni omtsha, oomodareyitha othethelekileyo kwiPnom Penh.
Umsebenzi oqhubekayo wokuguqula:
I-pol Pot yafakwa enkundleni ngokungabikho emsebenzini ngo-1980, kwaye yagwetywa ukufa. Nangona kunjalo, ukusuka kwindawo yokufihla kwisithili saseMalai sePhondo laseBanteay Meanchey, kufuphi nomda weCambodia / iThailand, waqhubeka eqondisa izenzo zeKhmer Rouge malunga nolawulo olulawulwa yiVietnam iminyaka. Wayememezela "umhlalaphantsi" wakhe ngo-1985, ebizwa ngokuba ngenxa yeengxaki zesifo se-asthma, kodwa waqhubeka ekukhombiseni iKhmer Rouge ngasemva. Ukukhungatheka, amaVietnam ahlasele amaphondo aseNtshona-ntshona aze aqhube ama- Khmer guerrillas eThailand ; Ipol Pot yayihlala eTrat, eThailand iminyaka emininzi.
Ngo-1989, iVietnam yashiya imikhosi yawo esuka eCambodia. Ipol Pot yayihlala eChina , apho yafumana unyango lomhlaza wesifo. Ngokukhawuleza wabuyela entshonalanga yeKambodia kodwa wenqaba ukuthatha inxaxheba kwiingxoxo zoorhulumente wobumbano. Umongo onzima wamaKhmer Rouge loyalists waqhubeka ukuphazamisa imimandla yasentshonalanga yelizwe kwaye wabulala imfazwe yama-guerrilla kurhulumente.
NgoJuni ka-1997, uPol Pot wabanjwa kwaye wavalelwa kuphela ngenxa yokubulawa komhlobo wakhe uSen Sen. Ugwetyelwe ukuboshwa endlwini ngenxa yentsikelelo yobomi bakhe.
Ukufa Nokufa KwePol Pot:
Ngo-Apreli 15, 1998, i-Pol Pot yakuva iindaba kwiNkqubo yeTrodiyo ye-radio eya kuthi iya kuguqulwa kwi-tribunal yamazwe ngamazwe. Wafa ngalobo busuku; Isizathu esisemthethweni sokufa sasinokukhubazeka kwentliziyo, kodwa ukutshisa kwakhe ngokukhawuleza kwaphakamisa ukusola ukuba mhlawumbi kwakuzibulala.
Ekugqibeleni, kunzima ukuhlola ifa lePol Pot. Ngokuqinisekileyo, wayengomnye wabatshazeli bamabhobhozi ebalulekileyo kwimbali. Isicwangciso sakhe sokungalungi sokuguqula iCambodia sawubuyisela ilizwe, kodwa kwakungenakudala i-utopia. Enyanisweni, emva kweminyaka emine kuphela amanxeba aseCambodia aqala ukuphilisa, kwaye uhlobo oluthile lokubuya lubuyela kulolu hlanga olubhubhile ngokupheleleyo. Kodwa isivakashi asinakuze sitshekishe phezulu ukuze sifumane izibonda zaseNcambodia ze-Orwellian nightmare phantsi kolawulo lwePol Pot.
Becker, uElizabeth. Xa iMfazwe iphela: ICambodia kunye neKhmer Rouge Revolution , iMicimbi kaRhulumente, 1998.
Kiernan, uBen. I-Pol Pot Regime: Uhlanga, Amandla kunye noKhuselo kwiCambodia phantsi kweKhmer Rouge , eHartford: I-Yale University Press, ngo-2008.
"Pot Pot," Biography.com.
Mfutshane, uFilipu. Pot Pot: I-Anatomy ye Nightmare , eNew York: MacMillan, ngo-2006.
Ukujonga kwii-Life of the First 12 AbaseRoma (iiKesare)
Iphrofayili epheleleyo yaseGibson SG
Iilwimi ezinamandla zokubhala kwakho
Kutheni AmaNgqina KaYehova Asebenza Ngendlu Ngayo Iindaba Zevangeli?
Izilwanyana zeentlanzi kwi Bowling
Iingoma zomculo zeMerengue Dance Party - Uhlu lwadlalwayo Ubusuku boMerengue Madness
Yakha i Window elula usebenzisa i-JFrame
UMthetho we-Posse Comitatus kunye ne-US Military kwiBorder
Iimali zabafundi abangabhalanga ukufunda (iminyaka eyi-15 nangaphezulu) eMbindi Mpuma
Imibuzo e-10 engaphendulwanga yezoqoqosho